Thumela i-Your Martech Zone I-athikili | Martech Zone
Thumela i-Your Martech Zone esihlokweni
Sicela ungabuzi ukuthi ungahambisa i-athikili, vele thumela i-athikili lapha. Anginaso isikhathi sokubuyekeza izicelo.
Nginephakeji elikhokhelwe ukukhulisa ukufinyelela komkhiqizo wakho nakho okutholakalayo:
Uma inhloso yakho ukuxhuma emuva, ngicela uhambe.
Kufanele kube okuhlobene nobuchwepheshe bokumaketha. Hhayi izindaba zebhizinisi, ukukhushulwa, noma izimali
Ukucaciswa: amagama angama-700 kuya kwangu-2,000 XNUMX, chaza inkinga, izindlela ezinhle kakhulu zokuxazulula inkinga, nokubuka konke kwesixazululo sakho. Faka phakathi isixhumanisi lapho othile engathatha isinyathelo esilandelayo - idemo, ukulanda, njll.
Izithombe-skrini, imidwebo, ilogo, nevidiyo konke kunconywa kakhulu (okungenani okukodwa).
Isilinganiso esivela kumsunguli noma umholi wokucabanga ngaphakathi kwenkampani sithinta kakhulu.
Icala lokusebenzisa noma indaba yekhasimende inamandla amakhulu.
Uma ungathanda ukuba ngumbhali, kufanele sibe ne- ikheli le-imeyili elilungile lombhali (hhayi i-PR firm) futhi kufanele babhaliswe ngesithombe I-Gravatar noma isithombe sifakiwe.
Ukhululekile ukufaka ucingo oluzoqala lubuyele esizeni sakho ukuze kwenziwe idemo, ukulanda, njll.
Uma ungathanda ukuhlanganisa ithuluzi, sazise. Sinamathuluzi amaningana anezivumelwano zokudlulisela kulezo zinkampani.
Nasi isibonelo esiqinile ebesisebenza ngaso I-Act-On Software.
Sikhululekile ukuhlela okuqukethwe, ukukufomatha, ukukususa, ukukubuyekeza, ukukuqondisa kabusha, noma ukwenza noma yini enye ngakho ukuqinisekisa ukuthi sigcina ukushicilelwa kwekhwalithi kwabafundi bethu.
IMM isika uDD isika YYYY
Ngokuthumela leli fomu, uyavumelana NOKHO KONKE okulandelayo.
Angikhokhelwa ukubeka ama-backlink ukuze ngithuthukise amazinga okusesha
Ngithumela isihloko sokuqala esingakashicilelwa noma sisatshalaliswa kwenye indawo
Ngiyaqonda ngokuthumela lokhu okuqukethwe ukuthi kungahlelwa noma kususwe noma kunini ngaphandle kwemvume yami
Ngiyaqonda ukuthi asikho isiqinisekiso sokuthi le ndatshana izoshicilelwa noma umugqa wesikhathi wokushicilelwa
Inkampani, Umkhiqizo noma Isevisi*
Ngabe ufaka i-athikili yangempela?*
Yonke imibhalo kumele ibe ngeyokuqala ngo-100% futhi ingathunyelwa kunoma iyiphi enye indawo. Kufanele futhi ufake igama lomlobi, ikheli le-imeyili, ne-headshot.
Cha - lesi sicelo kungenzeka sisuswe.
Yebo - nginamathisele konke okucelile.
Yebo - kepha sifuna Douglas Karr ukuba umbhali
Ikheli Le-imeyili Lombhali
Izindatshana zombhali ngeke zamukelwe ngaphandle kwekheli le-imeyili lombhali. Akukho okuhlukile.
Imisho emi-2 kuye kwengu-4.
Ama-Headshots, Amalogo, Izithombe-skrini kanye/noma Amadokhumenti
Izinhlobo zefayela ezamukelwe: jpg, gif, png, doc, zip, docx, Max. usayizi wefayela: 50 MB.
Noma imiphi imibhalo ye-byline idinga igama langempela, ikheli le-imeyili eliqonde kumbhali, isigqoko sokukhanda, kanye ne-biography yomusho ongu-2 kuye ku-4. Singafaka futhi noma yimaphi amakheli wephrofayili yomphakathi. Sicela uziphu bese ulayisha.
Ingabe unokunikezwa noma ubizela esenzweni?*
Uma unikeza okunikezwayo ku-athikili yakho, uzothola impendulo engcono. isib. Sebenzisa ikhodi engu-MARTECHZONE NGESIKHATHI esingu-10%. Sicela unikele ngesixhumanisi sendawo oya kuyo.
Uma unohlelo lokuhambisana nathi esingalijoyina, sinamathuba amaningi okuthi lokhu kushicilelwe.
Ngenkathi ulapha ...
Ungathanda ukubhalisela incwadi yethu yezindaba?